အသည်းအစားထိုး ကုသခြင်း (Liver Transplantation) အပိုင်း (၃) - Popular
အသည်းအစားထိုး ကုသခြင်း (Liver Transplantation) အပိုင်း (၃)
ကျွန်တော် ယခင်က ဆွေး နွေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ဝေဒနာရှင်မှာအသည်း အစားထိုးဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ် တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရှင်လက်ရှိရော ဂါအခြေအနေနဲ့ အသည်းအစားထိုးခွဲစိတ်မှုသင့်တော်ခြင်းရှိမရှိကို အစည်းအဝေး transplant meeting) မှာ အားလုံးတိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှု (Pre-op assessment) တွေကိုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအထူး ကုသမားတော်တွေရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ရယူပြီးမှဆုံး ဖြတ်ကြပါတယ်။ဒီအပတ်မှာတော့ Pre-op assessment အနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန် တော်တို့ အစည်းအဝေး (transplant meeting) မှာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာများကို ဗဟုသုတရအောင် ခြုံငုံပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဝေဒနာရှင် ရဲ့အသက်ကလည်း စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါ။ စင်တာ တိုင်းလိုလို ကွယ်လွန်သူ အလှူရှင် (Deceased Donor) ကနေ အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းကို အသက်(၇ဝ)နှစ်အောက် လက်ခံမဲ့ ဝေဒနာရှင်အတွက်ပဲလုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် (၇ဝ)နှစ် နည်းနည်းစွန်းမယ်၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက် ကောင်းမယ်။ သက်ရှိ အလှူရှင် (Living Donor) ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အသက်ကြီးလာရင် ခွဲစိတ် ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး တွေများလို့ပါ။
ဒီရောဂါရှိရင် ရောဂါ အတိမ်အနက်ကို သေသေချာချာစစ်ဆေး ဖို့လိုပါတယ်။ နှလုံးအထူးကုရဲ့ထင် မြင်အကြံပေးချက်တွေဟာ အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ရောဂါအခြေ အနေဆိုးရင် ဥပမာ နှလုံးသွေးကြော ပိတ်တာဆိုးရင် အဲဒီ နှလုံးရောဂါကို အရင်ကုပြီးမှ အသည်းအစားထိုးဖို့ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မကောင်းရင်လည်း နှလုံးလိုပဲ ရောဂါအတိမ်အနက်ကို စစ်ဆေးရပါတယ်၊ အသည်းအစားထိုးပြီးရင် ကိုယ်ခံအားက အစားထိုး ထားတဲ့ အသည်းကို မတွန်းထုတ် (rejection) အောင်သောက်ရတဲ့ ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်တဲ့ဆေး (immunosuppressives) တွေဟာ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင် ပါတယ်။ အရင်ကမကောင်းတဲ့ ကျောက်ကပ်အခြေအနေ ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် နောက်ပိုင်း ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသဖို့ လိုအပ်နိင်တာကိုလည်း ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြပါတယ်။
အသည်ြး<ွကပ် (cirrhosis) ပြီး အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက် စေတဲ့ အခြေအနေမျိုး(Hepato-Pulmonary Syndromeç Porto-Pulmonary Hypertension) ၏ တွေရှိနေတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေမှာ အဲဒီ အခြေအနေမပြင်းထန်ရင် အသည်း အစားထိုးကုသတာကို လုပ်နိုင်ပေ မယ့် ပြင်းထန်ရင်တော့ မလုပ်သင့်ပါ ဘူး။
အသည်းကင်ဆာရှိတဲ့ဝေဒနာ ရှင်တွေမှာ ကင်ဆာအဆင့်ဟာ ကျွန် တော် အပိုင်း(၂)မှာ ပြောခဲ့တဲ့ စံနှုန်း ( Milan criteria or UCSF criteria) ထဲ ဝင်မဝင် ဆန်းစစ်ကြပါ တယ်။ ကင်ဆာဟာ အဲဒီစံနှုန်းတွေ ထက် ကျော်လွန် (သကအ သ် ခမငအနမငေ) နေရင် အသည်းလဲသင့် မသင့်သေ သေချာချာ စဉ်းစားတိုင်ပင်ကြပါ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာ အသည်း လဲပြီးရင် ကင်ဆာပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ နှုန်းဟာ အလွန်များပါတယ်။ အဲဒီ လိုပြန်ဖြစ်ရင် မလဲခင်ကဖြစ်တဲ့ ကင် ဆာထက် ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်တဲ့ ဆေးတွေသောက်နေတဲ့ အတွက် ကင်ဆာပြန့်ပွားမှုကို ကိုယ်ခံအားက မတားနိင်တော့ပါဘူး၊ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ ရင် ငွေကုန်လူပန်းပြီး ခံစားရတာတွေအပြင် သက်တမ်းအားဖြင့်လည်း မရှည်နိင်ပါဘူး။
ဝေဒနာရှင်မှာ လက်ရှိသို့ မဟုတ်ငုပ်နေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ (active or latent Infection) ရှိ နေရင် အဲဒီရောဂါပိုးကို ကောင်း ကောင်းကိုင်တွယ်ကုသပြီးမှ အသည်းအစားထိုးကုသဖို့ကို စဉ်း စားကြပါတယ်။ (ဥပမာအားဖြင့် တီဘီရောဂါ)
ဝေဒနာရှင်မှာ လက်ရှိ ကင်ဆာတစ်မျိုးမျိုး (အသည်းကင်ဆာမှအပ) ရှိနေရင် အသည်းအစားထိုးလို့ မရပါဘူး။
(၈) သွေးတိုး နဲ့ ဆီးချို ရောဂါ
အဖြစ်များတဲ့ဒီရောဂါတွေရဲ့ ဆိုးကျိုး ((end organ damage) တွေရှိနေရင် သက်ဆိုင်ရာသမား တော်တွေရဲ့ထင်မြင်အကြံပေးချက်တွေကို အလေးထားပြီး အသည်း အစားထိုးလုပ်ဆောင်မှုသင့်၊ မသင့် တိုင်ပင်ဆွးနွေးကြပါတယ်။
ဘီပိုးရှိရင် အစားမထိုးခင်မှာ ဆေးသောက်ထားပြီး ခွဲစိတ်တဲ့အခါ သွေးထဲမှာပိုးကောင်ရေ ရှာမတွေ့ (undetectable viral load) ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်ပြီး ပိုးကောင်ရေများနေရင်တော့ ခွဲစိတ်ပြီးရင် ထိုးဆေး (HBIg: Hepatitis B Immunoglobulin) ကို အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေးဖို့ စီစဉ်ရပါတယ်။ ဘီပိုးသောက်ဆေးကိုတော့ ရာသက်ပန်သောက်ရမှာပါ။
စီပိုးရှိရင် အသည်းအခြေ အနေပေါ်မူတည်ပြီး သောက်ဆေး (DAA: Direct Acting Anti-viral) တွေနဲ့ ဘယ်တော့ကုသရင် ဝေဒနာရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ ယခင်ထိုးဆေးတွေခေတ်ကဆို အသည်း ခြေအနေဆိုးတဲ့ ဝေဒနာရှင်အများစု ဟာ ဒီထိုးဆေးတွေရဲ့ ဆိုးကျိုး (side effects) တွေ မခံနိုင်ကြပါဘူး။
အပိုင်း(၃)ကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ရင် အသည်းအစားထိုးကုသမှုနဲ့ သင့် တော်မှုရှိမရှိကို
– လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရောဂါအခြေအ နေအားလုံးကိုသုံးသပ်ပြီးအကြမ်း ဖျင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
– များသောအားဖြင့်လိုအပ်တဲ့စစ် ဆေးမှု (Pre-op Assessment) တွေကို လုပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။
– သက်ဆိုင်ရာ အထူးကုသမား တော်တွေရဲ့ ထင်မြင်အကြံပေးချက်တွေကိုရယူပြီး အစည်းအဝေး (multi-disciplinary transplant meeting) မှာ အားလုံးတိုင်ပင်ဆွေး နွေးဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ နောက်အပတ်မှာတော့ သက်ရှိအလှူရှင် (Living Donor) အတွက် လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုများ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါမယ်။
MBBS(Ygn), MRCP(UK), FRCP(Edinburgh), FAMS Gastroenterology (Singapore)ကျမ်းကိုး
1. The New England Journal of Medicine. 1996;334(11):693-699.
2. Hepatology.2001;33(6): 1394-1403.
မြန်မာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ပြီးရင် အချိန်ပေးရကျိုးနပ်တယ်ဆိုတဲ့အသံပဲ ကြားချင်တယ် နိုင်းနိုင်း
ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ လမ်းထဲမှာ စတုဒိသာ ကျွေးမယ် မေသက်ထားဆွေ 855 views
မင်္ဂလာ စာမေးပွဲများ ပွင့်လန်းရာ ပိုက်သင်ရွာသို့မဟုတ်ပထမကျော် အောင်စံထား ဆရာတော် မွေးရပ်မြေ